Teboka am-bavaka mba hiomanana amin'ny fanadinana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Teboka hivavaka mba hiomanana amin'ny fanadinana
Teboka hivavaka mba hiomanana amin'ny fanadinana
Febroary 14, 2020
Mpitoriteny 9:11: Niverina aho ary nahita tany ambanin'ny masoandro fa tsy ny haingam-pandeha no hazakazaka, na ny ady ho an'ny mahery, na mofo ho an'ny hendry, na harena ho an'ny olona manan-tsaina, na fananan'ny olon-kendry, ny fahaiza-manao; fa ny fotoana sy ny fotoana hitranga amin'izy rehetra.
Tadidiko nandritra ny andron'ny mpianatro, nanao resaka niaraka tamin'ny mpiara-mianatra tamiko aho ary nisy zavatra nanohina ny saiko nandritra ny tara-dresaka. Iray amin'ireo mpianatra tena mahay indrindra ao amin'ny kilasiko ny kristiana izay manaja ny olona rehetra fa manolo-tena tokoa izy. Nilaza tamin'ny vehivavy iray tao amin'ny kilasiko izy fa tsy mivavaka alohan'ny hipetrahany hanaovana fisavana.
Na izany aza, izy dia iray amin'ireo manam-pahaizana tsara indrindra amin'ny departemanta iray manontolo. Nandritra ny resaka dia nanohitra ny iray hafa fa zava-dehibe ny mivavaka alohan'ny hanoratana fanadinana, nitodika tany amiko izy nanontany raha mivavaka koa aho alohan'ny hanoratana fanadinana. Nolazaiko azy tsy misy dikany izany antony izany mivavaka alohan'ny hanoratana fanadinana. Avy eo dia nanao fanambarana maharesy lahatra izay tonga tao an-tsaiko izy, na dia mety ho toa rehareha aza ny fanambarany, dia nanamboatra teboka mety izy izay marina. Nilaza izy fa nomen'Andriamanitra fahasoavana hamaky sy hahatakatra isika, ary imbetsaka isika tsy mila mivavaka ho azy dia fanomezana voajanahary ho an'ny olombelona.
Na izany aza, ny fomba ampiasantsika ny atidohantsika dia miankina amintsika, tsy andraikitra amin'izany Andriamanitra. Nanohy ny filazany izy fa tsy mahomby ny ankamaroan'ny kristiana examination satria mivavaka mafy nefa izy ireo dia mandà tsy hamaky ny refy mitovy amin'izay efa nivavahany. Ankehitriny, ato amin'ity lahatsoratra ity, tsy mamporisika ireo mpianatra hivavaka isika raha tsy mamaky. Aza adino fa ny andinin-teny milaza fa ny fandinihana mba hampisehoanao fa ankasitrahana.
Mandritra izany fotoana izany, zava-dehibe ihany koa ny mivavaka alohan'ny sy aorian'ny fanoratana ny famindram-po sy ny famindram-po amin'Andriamanitra miaraka amin'ny script, rehefa manaraka ny soratrao ny fankasitrahan'Andriamanitra dia hahita fahasoavana eo imason'ny mpandinika izany. Araka izay efa nomaninao tsara amin'ny fandalinana mafy dia zava-dehibe ihany koa ny mivavaka mafy koa. Ny gimmika tsotra dia mivavaka toy ny hoe mbola tsy namaky sy novakiana toy ny mbola tsy nivavaka ianao.
Noho izany, aorian'ny famakiana ary mila mandamina ny zava-misy any amin'ny fanjakan'ny fanahy ianao dia mila miteny amin'Andriamanitra. Nanangona lisitr'ireo hevitra momba ny vavaka izahay mba hilazana fa hiomana hanao fizahana. Mamporisika anao hampiditra ity vavaka ity amin'ny finoana aho, satria fantatro fa tsy amin'ny herin-tsaina, na amin'ny herin-tsaina, fa amin'ny fanahin'ny Tompo. Hahita fahombiazana ianao amin'ny fanadinana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
• Tompo ô, misaotra anao aho noho ny fahasoavana nomenao ahy hianarana, misaotra anao aho noho ilay tombontsoa nametrahana zavatra, hanome voninahitra anao ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy.
• Mivavaka aho mba hanohizako ny famakiana fa hanome ny fahasoavana ianao amin'ny fahazoana zavatra tsara sy amin'ny fototra amin'ny anaran'i Jesosy.
• Mangataka ny fanahin'ny fahalalana, ny fahalalana ary ny fahendrena aho, izay ahafahako manoratra amin'ny fomba marina amin'ny famakafakana, mivavaka aho fa hamoaka izany amiko amin'ny anaran'i Jesosy izany.
• Ry Tompo Ray, rehefa miomana amin'ny fandinihako aho dia mangataka aminao aho fa hahazo sitraka amiko amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
• Milaza ny Baiboly raha misy olona tsy ampy fahendrena dia avelao izy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka. Ray be fitiavana dia mangataka aminao aho mba hanomeo ahy fahendrena izay hakarina amin'ny anaran'i Jesosy.
• Manohitra ny fanahin'ny tahotra rehetra aho izay mety te hanjaka amin'ny foko, dia potipotiko amin'ny ran'i Kristy izany.
• Ny Baiboly milaza fa aza matahotra fa Andriamanitrao aho, aza matahotra satria miaraka aminao aho, mangataka herimpo ara-panahy aho hanehoako tsara ny hevitro ao amin'ny efitrano fanadinana.
• Ry Mpanjaka marina, mpamorona ny zava-drehetra ianao amin'ny loharanom-pahalalana sy fahendrena, mangataka aho fa hanazava ny haizin'ny fahalalako ny fahazavanao, mangataka aho fa ny fanahinao masina dia hiaraka amiko sy handringana ny endriny rehetra. tahotra izay mety te hipoitra.
• Ry Ray be fitiavana, ianao. ny fiandohan'ny olombelona rehetra, mangataka aminao aho fa hanome ahy ny fahasoavana sy ny fahaizana manazava ny fanontaniana rehetra ho fantatro ao amin'ny efitrano fandinihana.
• Mivavaka ho an'ny herin'ny fanahinao masina izay mandika ny fahantrana mihidy amin'ny tenin'Andriamanitra, mangataka aho fa hanampy ahy handika ny fanontaniana rehetra hametrahana izany amin'ny anaran'i Jesosy.
• Ry Tompo Andriamanitra, mangataka ny fanahin'Andriamanitra aho izay hampahatsiaro ny zavatra rehetra novakiako mba tsy ho tadidiko, fa tsy hanadino ny teboka rehetra novakiako aho.
• Mikatsaka ny fahasoavanao izay hanjavona lalandava ary hampahatsiaro ny zavatra rehetra novakiako.
• Ry Tompo any an-danitra, manohitra ny hery rehetra entin-teny aho amin'ny alà an'i Jesosy sarobidy. Ny hery rehetra te hanelingelina ny ezaka ataoko dia aringako amin'ny herin'i Jesosy izy ireo.
• Mikatsaka ny hery izay hanome ny lavanty hahalala ny sain'ny mpandinika aho. Ny hery izay hampahafantatra ahy ny fomba tian'ny mpandinika hovaliana, Tompoko mangataka aminao aho mba homenao ahy.
• Ry Jesosy Tompo, manohitra ny hery rehetra tsy fahombiazan'ny ràn'ny zanak'ondry aho. Jesosy tsy mba nahomby mihitsy, nanjary tsy ho vitako ny tsy mahomby, isaky ny tsy fahombiazan'ny fikasan'ny fahavalo, hopotiko amin'ny anaran'i Jesosy izany.
• Ry Ray Tompo ô, mivavaka aho fa homenao fahasoavana aho amin'ny fanazavako rehetra, mitady ny fahasoavana aho hanehoana ny tenako am-pitandremana sy am-pitiavana, avelao ny Tompo hamonjy ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
• Mangataka ny fanahin'ny hatsaram-panahy aho, iray amin'ireo nomenao an'i Daniel izay nanasaraka azy tamin'ny hafa, ny toe-tsaina mahomby izay hanavaka ahy amin'ny fahombiazana, mivavaka aho fa hamoaka ahy amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
• Tompo ô hatolotra eo an-tananao izay tratry ny fanadinana aho, mangataka aho hanamasinanao izany andro izany amin'ny anaran'i Jesosy.
• Manohitra ny teti-panao sy tetika rehetra an'ny devoly aho mba hamotika izany andro izany na hanakorontana ahy amin'ny herin'i Jesosy amin'ny herin'i Jesosy.
• Misaotra mpanjaka misaotra tamin'ny vavaka novaliana, misaotra noho ny fahombiazana natao tamim-pahatsorana, misaotra anao rehefa nanamarika io andro io ho amin'ny fahalavorariana, mankasitraka anao aho, ry Mpanjaka any an-danitra, avelao hasandratra ny anaranao mahery.
Previous lahatsoratra20 Ireo vavaky ny vavaka hahazoana fanafahana amin'ny fanitsakitsaham-bady
Next lahatsoratraNy vavaka ho fiarovana amin'ny ratsy
Vavaky ny ady ara-panahy amin'ny fanoherana
50 Ady amin'ny ady dia manondro ny aretina sy ny aretina